Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao baolina kitra frantsay Tantara momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazan-jaza ka hatramin'ny Untold Biography Facts
Manome fandrakofana feno momba ny Ibrahima Konate's Tantara momba ny fahazazana, Biography, Fiainam-pianakaviana, ray aman-dreny, fiainam-piandohana, fiainana manokana, sakaiza vavy, fomba fiaina sy zavatra hafa malaza nanomboka tamin'ny fahazazany hatramin'ny fahazazany.
Ny fiainana tany am-boalohany sy ny fiakarana lehibe an'i Ibrahima Konate. Credits: AllFootballApp, EstRepublicain ary IG.
Eny, fantatry ny rehetra fa mora ekena ny mpiaro amin'ny fahagagana (6 tongotra ary 4 santimetatra) avo. Tsy vitan'izany fa izy no ivon'ny ivotoerana ambany indrindra eto an-tany.
Na izany aza, vitsy ny mpitia baolina kitra no namaky ny Biography Ibrahima Konate izay nomaninay ary tena mahaliana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Tantara momba ny fahazazana Ibrahim:
Hebahima Konaté dia teraka tamin'ny andro 25 mey 1999 tao amin'ny tanànan'i Paris, France. Ny mpiaro 6 tongotra 4 dia teraka tamina fianakaviana lehibe, toy izany koa izy dia iray amin'ireo zandriny indrindra teraka tamin'ny ray aman-dreniny izy.
Na dia tsy zaza farany aza izy, dia nifalifaly tamin'ny tontolo tonga lafatra i Ibrahima kely niaraka tamin'ny zandriny mahafatifaty izay mandeha amin'ny anarana Moriba Konate.
Young Ny fitomboan'i Ibrahimahima Konate niaraka tamin'ny anadahiny zanany, Moriba izay heveriny ho namany akaiky.— IG
Ho an'i Ibrahima, ny fahatsiarovana lehibe indrindra tamin'ny fahazazana dia ny nandaniany tamin'ny zandriny lahy Moriba. Nifankatia tamim-pitiavana hatrany izy mirahalahy hatramin'ny fahazazany, hira iray nahatonga ny fifankatiavana roa tonta.
Ny Fiandohan'ny Fianakaviana Ibrahim
Rehefa mitsara avy amin'ny endriny maizina dia mety ho fantatry ny ray aman-drenin'ilay mpiaro tena fa manana razambe afrikanina ianao. Marina fa marina ianao. Ny marina dia ny fianakavian'i Ibrahima Konate avy any Mali.
Raha tsy fantatrao, i Mali dia firenena tompon-tany iray, firenena lehibe indrindra (amin'ny habeny) any Afrika Andrefana. Ny firenena Afrikana Tandrefana dia avo roa heny noho ny haben'ny Texas, ny fanjakana amerikana faharoa lehibe indrindra.
Fantatrao ve? ... Hebahima Konate dia manana fianakaviana Malia mitovy amin'ny mpilalao baolina kitra frantsay malaza. Ireo mpilalao baolina ireo dia ahitana ny tiany Moussa Sissoko, Moussa Dembele, N'Golo Kanté ary Djibril Sidibé.
Ny ray sy ny reny rehetra te hiteraka zaza tony ary tsara vintana, ny ray aman-drenin'i Ibrahima Konate dia nahazo izany toetra izany tao amin'ny zanany lahy. Ny marina dia, ilay mpiaro 6 ′ 4 ″ dia efa tony hatramin'ny fahazazany. Tamin'izy mbola kely, i Konate dia nanana izany fahitana izany amin'ny fahalalana izay iriny eo amin'ny fiainana.
Noho ny fanampian'ny fianakaviany dia afaka manombatombana ny ho aviny izy. Ankoatr'izay, apetraho amin'ny lalana tokony halehany ny lasa iray- mpanao baolina kitra. Na dia niharan'ny heloka bevava aza ny zaza sasany, i Konate dia niaina fiainana milamina sy efa nijery mialoha ny fahazazana.
Nilalao baolina betsaka tokoa ilay tovolahy nandritra ny fahazazany. Ny fanamafisana ny fahaizany baolina kitra isan'andro dia ny fomba nanabe an'i Konate ny tenany. Mazava ho azy fa ny lalao baolina kitra dia nandalo tamin'ny faneken'ny ray aman-dreniny. Na ny reniny sy ny dadany dia samy nahita ny baolina kitra ho fomba mahasoa ny fiaraha-monina mba hampihenana ny loza mety hitranga amin'ny heloka bevava, herisetra ary ny fampiasana zava-mahadomelina.
Noho ny fahafantarana ny fanirian'izy ireo hilalao baolina amin'ny fivelomana, ny ray aman-drenin'i Konate dia nanao izay azony atao mba hanohanana ny faniriany. Tamin'ny faha-10 taonany dia nisoratra anarana tany amin'ny akademisiana tao Paris FC ilay tovolahy taorian'ny fizahan-toetra nahomby. Paris FC dia klioba baolina kitra matihanina frantsay any Paris. Io no akademika tena ankafiziny indrindra satria manakaiky ny fianakavian'i Konate.
Fiainana eo am-piandohana:
Tao Paris FC dia nankafy ny baolina kitra i Konate rehefa hitany fa mivoatra haingana ny talentany. Ny fandrosoana nahomby dia nahita azy nandrisika ny laharam-pianarana any Paris.
Teo amin'ny faha-14 taonany dia tsapan'ny ray aman-drenin'i Ibrahima Konate fa ilain'ny zanany lahy ny hilalaovany baolina any an-kafa. Noho ny toetrany, ilay tanora dia nitaky fangatahana lehibe nataon'ny oniversite maromaro izay nangataka sonia.
Na dia somary misalasala kely amin'i Rennais sy Caen aza, nanapa-kevitra ny hanao sonia an'i Sochaux ny tanora Ibrahima, satria izy ireo no ho tonga voalohany. Tsy vitan'izay fa ny club, tsy toy ny hafa, dia naneho ny faniriana fatratra indrindra hisambotra azy.
Na eo aza ny fifanarahana dia mbola misalasala ihany ny ray aman-drenin'i Konate (indrindra ny reniny). Nandray fanapahan-kevitra ny fitsidihana ny klioba izy mba hahitana azy io ho fitaovana ho azy ireo manokana. Raha niresaka ny traikefa dia hoy i Konate indray mandeha.
“Nitsidika ny trano fianarako niaraka tamin'ny reniko aho. Hitany fa teo amin'ny ambaratonga sekoly. Izy ireo dia FAHAGAGANA. koa niaraka taminy aho. ”
Tantara momba ny tantara momba ny Biography:
Ny fiatrehana ny fanalavirana ny ray aman-dreny sy ny fianakaviany amin'ny voalohany, dia iray amin'ny zavatra mafy indrindra amin'ny fiainana baolina kitra tanora.
Tao Sochaux, fantatr'i Ibrahima mba hanamboarana azy, voatery nanamboatra ny toerany vaovao izy toy ny trano. Rehefa afaka fotoana kelikely, dia nanomboka nanatevin-daharana tamin'ny mpiara-miasa aminy izy - indrindra ilay sakaizany indrindra, Bryan Lasme (mpilalao baolina kitra frantsay).
Ny fahamatorana ny baolina kitra Konate tao Sochaux dia zavatra tsy nampoizina fotsiny. Nivoatra isan-taona izy, ary nandray ny andraikiny baolina kitra. Na izany aza, tsy ny zava-drehetra no nomena teo amin'ny lovia. Ankehitriny, avelao hitondra anao ny tantaram-piainan'i Konate izay mety tsy fantatrao mihitsy.
Olana amin'ny fahasalamana:
Fantatrao ve?… Ny fahasalamana miharatsy no hany zavatra nametra ny fivoarany teny amin'ny ambaratonga fianarany. Ny marina dia, tsy nahomby taminy ny fahasalamany tamin'ny fotoana nilàny azy tamin'ny famitana ny diplaoma amin'ny oniversite.
Soa ihany fa niditra an-tsehatra ny ray aman-drenin'i Ibrahima Konate sy nampionona azy rehefa tsy sitrana intsony. Raha niresaka momba ny zava-niainana, dia nilaza ny mpiaro iray.
Nisy fandidiana izay nampihena kely ahy, saingy namela ahy hiverina mafy kokoa.
Soa ihany, tsy manenina aho rehefa nahazo diplaoma tamin'ny akademia.
Nilaza ny baolina kitra frantsay FranceBleu tao anaty tafatafa.
Taorian'ny fizarana diplaoma tamim-pianarana, dia nalefa tany amin'ny ekipa mpitahiry ny klioba B (Sochaux B) i Young Ibrahim. Na izany aza, nisy zava-mampalahelo ny zava-nisy rehefa nahita ny ekipany izy nitolona ary nahita fa sarotra ny nandentika azy tao amin'ny sokajy zokiny.
Sahala amin'ireo mpilalao tanora saro-kenatra be dia be i Konate. Ny vokatr'izany dia izao no ampahany lehibe indrindra amin'ny tantaram-piainany, tsy hohadinoiny maika.
Nahatsiaro fahasosorana tao Sochaux ilay tanora, fampandrosoana izay nahatonga ny fivoahany avy tao amin'ny klioba. Trosa: fortunebetng
“Nanapa-kevitra ny hiala aho, satria saika tsy teo akory ilay tompony ary tao anaty zavona aho. Ny ratsy indrindra dia nandao an'i Albert Cartier aho.
Nandritra io fotoana tsy fahatokisana io, ireo klioba nitady ny hamindrana ahy dia nanjary tsy mifikitra. Anisan'ireny i RB Leipzig.
Mitsangàna amin'ny tantaram-piainan'ny tantaram-piainana malaza:
Sambany teo amin'ny fiainany dia tsy maintsy nandao ny fianakaviany sy ny fireneny i Ibrahima Konate (tany Alemana).
Tany RB Leipzig dia lasa biby mpiaro izy. Ny marina dia ny hahavony mirefy 6 metatra ny haavony dia nahafahan'ireo mpanohitra rehetra nihorohoro noho ny famindram-pony.
Ireto misy tsiambaratelo lehibe roa amin'ny fiakaran'ny Konate. Ny voalohany dia Julian Nagelsmann, ilay talen'ny RB Leipzig tanora izay nanangona sy naneho finoana be dia be taminy. Mitovy ihany Ethan Ampadu, Nampiasa an'i Ibrahima i Nagelsmann ary tsy nijery ny taonany akory.
Faharoa, ny mpiaro ny frantsay dia nahazo aingam-panahy avy amin'ny mpiara-miasa aminy Dayot Upamecano izay heveriny ho anti-panahy. Samy miaro ny mpiaradia (amin'ny vanimpotoana 40 taona teo ho eo) dia fiaraha-miasa miaro tena mahomby, hira mahafaly ny mpanazatra sy ny mpankafy.
Saika tsy fantatra akory any Frantsa, Ibrahim Konate, na dia mbola kely aza, dia mampiseho ny fahatsinjovany fa mety ho lasa ho avy izympiaro tena tsara indrindra eran'izao tontolo izao ”.
Toy ny fanantenana mamirapiratra hafa - niresaka momba ny tiana Mason Holgate ary Matthijs de Ligt, Nanaporofo ihany koa i Ibrahima fa isa fotsiny ny taona. Ny ambiny, araka ny voalazantsika, ny tantarany ankehitriny.
Fitiavana- Single, Manambady, sakaiza sa misy vady ?:
Nanontany ny mpankafy baolina kitra- Iza no sakaizan'ny Ibrahima Konate? bola: Onzemondial
Ny mpiaro vatolampy dia tsy vitan'ny hoe mamoaka vaovao ho an'ny faha-6 taonany avo sy fampisehoana baolina kitra mahavariana. Tato ho ato dia efa nisy faniriana fatratra ny mpankafy sy ny mpanao gazety hahalala raha manana sipa iray i Ibrahima Konate. Tsy vitan'izany fa na mpitovo izy, na manambady (miaraka amin'ny vady miafina) ary manan-janaka.
Rehefa avy nanadihady nandritra ny ora maro izahay dia tonga amin'ny zava-misy fa i Konate (tamin'ny fotoana nanoratana) dia tsy nanao ofisialy ny fifandraisany. Amin'izao fotoana izao, ny kaontiny media sosialy dia tsy taratry ny fifandraisany na ny fifandraisan'ny sipa iray na vadin'ny vehivavy WAG.
Asides mijery azy eny an-tsehatra, ary amin'ny tanjona hahalala azy bebe kokoa, mpankafy matetika no nanontany- Iza moa i Ibrahima Konate ?. Ny fahafantaranao ny fiainany manokana any ivelany dia hanampy anao hahatakatra azy bebe kokoa.
Manomboka, somary mahazatra ny mahita ireo mpilalao baolina kitra tianay izay mandehandeha eran'ny tanàna miaraka amin'ny sakaizany na WAG. Konate kosa dia aleony mandeha miara-mandeha Dagouss bitro sarobidy aminy. Ny marina dia, mpiaro ny bitro efa hatramin'ny ela ny mpiaro ny 6foot 4.
Ibrahima Konate Fiainana Manokana- Izy dia mpisolovava Rabi marina - Loharano: IG
Ny tantarany fahombiazana dia mety tsy ho mora tohina satria nanjary tsy nisy olona ao amin'ny fianakaviana. Amin'ity fizarana ity dia homenay anao ny zava-misy momba ny fianakavian'i Ibrahima Konate manomboka amin'ny ray aman-dreniny.
Mikasika ny dadan'i Ibrahima Konate:
Ny voalohany sy ny voalohany dia avy amin'ny maleziana ny Malia noho ny nahaterahany. Ianao, ny fampahalalana momba azy dia tsy voarakitra an-tsoratra. Na izany aza, fantatsika fa ny dadan'i Konate dia miaina fiainana milamina ao Frantsa izay manara-maso ny fivoaran'ny zanany.
Momba ny Bokin'i Ibrahima Konate:
Antsoinay hoe ny reny miaro. Ny renin'i Konate dia iray izay manao dingana miavaka hiarovana sy hikolokolo ary hitaiza ny zanany. Notsongaina taminy foana izy nandritra ny fahatanorany. Aza hadino fa ny renin'i Konate no nanome ny farany handehanany ho mpikambana ao amin'ny Akademia Sochaux.
Momba ny Rahalahy Ibrahima Konate:
Moriba Konate, zokin'i rahalahin'i Ibrahima Konate dia matotra avokoa. Ity sary ity eto ambany dia mitovy daholo ny an'ny rahalahy. Miezaha hanavaka ireo rahalahy roa raha azonao atao!.
Hihaona amin'ny Anadahy Ibrahima Konate izay toa lehibe avokoa. - Instagram
Ny fananana harato 5 tapitrisa Euros sy ny sandan'ny 45 tapitrisa Euros dia azo antoka fa mahatonga an'i Konate ho mpilalao baolina iray tapitrisa. Izany anefa, dia tsy miova ho fomba fiaina mamirapiratra. Maninona?… Ny azy satria ny Ibrahimahima Konate dia aleony tsy mampiasa ny karamany azony raha te hampiseho fiara lafo, manatevina, sakaiza, buzz, sns.
Manoloana izany dia mampiasa ny volany amin'ny mpanao dia lavitra any amin'ny tany efitr'i Dubai ny mpilalao baolina kitra frantsay. Indraindray dia aleony mandany fotoana amin'ny zava-drehetra amin'ny anaran'ny famerenany ny heriny.
Konate dia tia ny tany tany Desert Dubai, izay handaniany ny fialantsasatra.— IG
Raha tsy manao dia any an-tany foana i Konate, aleony misafidy ny handany fotoana tsara amin'ny toerana filokana an-dranomasina. Ny marina dia tsy raisin'ilay mpiaro ny fahafinaretana amin'ny fiainana an-dranomasina sy any an-tany efitra.
Tian'ny mpilalao baolina mandany fotoana amin'ny kalitaon'ny loharanon-dranomasina- Loharano: Picuki
Ny tantaran'ny fahazazana sy ny tantaram-piainana dia latsaka tanteraka raha tsy manambara aminao ny tena tranga vitsivitsy. Ao amin'ity fizarana ity dia homenay anao fahalalana izay tsy fantatrao momba ilay mpiaro.
Zava-misy # 1: Mandrava ny karamany:
Rehefa nafindra tany RB Leipzig, Julian Nagelsmann nihevitra Konate fifanekena, iray izay nahita azy nahazo karama mitentina 1 Million Euro (860,000 Pound) isan-taona. Miakatra ny karamany amin'ny isa isika, manana izao manaraka izao.
Fotoam / AMOUNT
Ny vola azony any Euros
Ireo vola miditra ao amin'ny Pounds
Ny fidiram-bolany amin'ny lalao saribakoly
Inona no azony karama isan-taona: € 1,000,000 £ 874,807 $1,092,295
Inona no azony karama isam-bolana: € 83,333 £ 72,900 $91,025
Inona no azony isaky ny Herinandro: € 19,380 £ 16,953 $21,169
Ny karama azony isan'andro: € 2,769 £ 2,422 $3,024
Inona no azony isaky ny Ora: € 115 £ 101 $126
Inona no azony isaky ny Minitra: € 1.9 £ 1.7 $2.1
Inona no azony isaky ny segondra: € 0.03 £ 0.02 $0.03
Izany no IBRAHIMA KONATE nahazo tombony hatramin'ny nanombohanao ity pejy ity.
Raha ny vakiteny hitanao eo ambony (0) dia midika hoe mijery pejy AMP ianao. ny Non-DIEM pejy manambara ny fiakaran'ny karamany amin'ny segondra.
Fantatrao ve?… Ny lehilahy antonony any Alemaina izay mahazo vola manodidina € 3,770 iray volana no mila miasa farafaharatsiny 1.8 taona mahazo € 83,333. Ity no karama farany nataon'i Ibrahima Konate mandritra ny iray volana amin'ny tranon'ny karama etsy ambony.
Zava-misy # 2: Rating FIFA:
Ny fahaiza-manaon'ny FIFA Ibrahimahima Konate
Ny frantsay frantsay dia 20 fotsiny amin'ny fotoana hametrahana an'io sombiny io. Na izany aza, ny famandrihana ankapobeny dia mamaky 79. Ankehitriny, inona no ambaran'izany aminao?…. Ho anay, mino izahay fa manana fanantenana tsara i Konate, izay mahita azy mahazo famindrana any amin'ny iray amin'ireo klioba lehibe indrindra amin'ny baolina kitra eran-tany. Ankoatr'izay, ny mety ho voatondro amin'ny anarana hoe:Mpiaro lehibe indrindra eto an-tany".
Zava-misy # 3: fitokanana amin'ny Fivavahana silamo:
Ho mariky ny finoany matanjaka, manaraka ny fitsipiky ny finoana silamo i Ibrahima noho ny ray aman-dreniny izay nitarika azy hanaraka ny kolontsain'izy ireo silamo.
Porofo ny maha-voatokana ho an'i Ibrahim Ibrahimima ny fivavahana Ismalika. Source- Instagram
Zava-misy # 4: solonanarana:
Azonao atao angamba ny milaza fa "Ibra", na izany aza. Ny anaran'ny anaran'i Ibrahimahima KonateIbu". Nomena mpiara-miasa aminy ity anarana ity fony izy tao amin'ny efitra fisoloana akanjo. Indraindray, miantso azy hoe "Ibuprofen".
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana iray amin'ireo marobe ataontsika Tantara momba ny fahazazana Plus Untold Biography facts. Ao amin'ny LifeBogger dia miezaka ny hisian ny fahitsiana sy ny rariny isika. raha mahita zavatra tsy tsara ianao dia azafady zarao aminay avy hatrany amin'ny alàlan'ny fametrahanao ny hevitrao.